City of Vantaa - 2020119-somali-lukiolaisille
Dhallinyarada reer Vantaa- falkiina ku taageera sidii looga hortagi lahaa faafista feyruska korona
Ma dooneysaa in aad saaxiibbadaa kula kulanto xarunta dhallinyarada ama goobta hiwaayaddaada? Ma dooneysaa in aad sidii caadiga aheyd u yara gaartid maktabadda, hoolka ciyaaraha barafka ama tababarka ciyaarta kubbad xeegeedka hoolalka(sähly)?
Waxaan feyruska korona uga hortagi karnaa, marka aan u hogaansanno xaddidaaadaha loogu talaggalay joojinta feyruska. Haddii aan ka adkaanno xanuunkaan safmarka ah, xilliga qaboobaha ama jiilaalka soo socda waxaan qaban karnaa waxyaabo kale, intii aan guryaha iska dhex fadhin lahayn. Xaddidaadaha la soo rogay waa kuwo adiga ku badbaadinaaya, sidoo kale waxaa ay badbaadinaayaan saaxiibbadaa iyo xubnaha qoyskaaga.
Saaxiibbadaa waxaad ku kulantaan si koox yar ah, kana faa’iidayso wada xiriirka dhanka internetka ah
Feyruska korona waxaa uu haatan si welwel leh ugu dhex faafayaa munaasabadaha qoysaska isugu yimaadaan iyo kuwa guud ee dadku ku kulmaan. Waxaa la soo jeedinayaa in marka la qabanqaabinaayo munaasabadaha gaarka ah ee dadku ku kulmayaan, ay dadka kulmayaa noqdaan ugu badnaan 10 qof. Saaxiibbada waxaad ku kulmi kartaan qaab laba laba qof ah ama koox yar ah. Meelkasta oo aad kula kulmeyso saaxiibbadaa, guriga ama goobaha guudba, waxaad mar walba xusuusnaantaa in aad ku dadaashaan nadaafadda caafimaadka ee gacmo dhiqista iyo kala fogaanshaha.
Isticmaal afshareerka, kaasoo ah arrin saamayn fiican leh
Qaadashada afshareerka waxaa loo soo jeediyay qof kasta oo ka weyn 15 sano, waxaana muhiim ah in la qaato marka la raacaayo gaadiidka dadweynaha, marka la joogo goobaha guud ee dadku ku kulmaan iyo munaasabadaha guud, sidoo kale marka danaha laga dhammeysanaayo dukaamada, bankiyada, sidoo kale xarumaha dhallinyarada iyo marka la joogo goobaha hiwaayadda.
Waxaa la soo jeediyay in afshareerka la qaato marka la joogo goobaha adeegyada magaalooyinka, gaar ahaan marka isusoo dhowaanshaha aan laga badbaadi karin. Talosoojeedintaas waxaa ay khuseysaa maktabadaha, goobaha isboortiga, matxafyada, goobaha dano dhammeysiga, dugsiyada iyo macaahidda waxbarashada ee heerka labaad.
Sidoo kale afshareerka waa in la isticmaalo marka la joogo goobaha isboortiga ee gudaha lagu ciyaaro, xitaa mararka aan wax isboorti ah lagu ciyaareynin goobahaas. Arrinkaan wuxuu khuseeyaa dhammaan goobaha isboortiga gudaha, tusaale ahaan hoolalka isboortiga ee iskuullada. Sidoo kale garoomada waaweyn ee ciyaaraha barafka.
Iska ilaali qeylada, hees qaadista iyo neefsashada xoogga ah, arrimahaas waxaa ay wax ka geysan karaan faafista feyruska koronaa. Ha ka qaybgalin wax howlo ah, adigoo ay ku hayaan qaar ka mid ah astaamaha xanuunka, xitaa hadday yihiin astaamo fudud ama khafiif ah.
Noqo qof u dhaqma si mas’uuliyad ku dheehan tahay, marka aad baararka joogto.
Haddii aad xaflad leedahay, ku dadaal kala fogaanshaha iyo nadaafadda caafimaadka. Gobolkaan Uusimaa baararka caadiga ah kuwa khamriga, maqaaxiyaha iyo caweyska habeenkiiba, waxaa loo oggol yahay in ay gudaha soo geliyaan kala bar tiradii macaamiishooda caadiga ahaa. Maqaaxiyaha cuntada iyo kuwa qaxwaha waxaa ay gudaha soo gelin karaan afar meeloodoo saddex meel oo ka mid ah macaamiishooda caadiga ah.
Maqaaxiyuhu waa in ay u dhexeysiiyaan masaafo kala fogaansho ku filan macaamiisha. Qof kasta oo macaamiisha ka mid ah habdhaqankiisa u gaarka ah ayuu ku saameyn karaa sidii qaab nabadgelyo leh loogu joogi lahaa maqaaxiyaha gudahooda.
Maskaxdaada ma ka guuxayaan wax ku saabsan arrimaha korona – Si geesinimo iyo dhiirranaan leh u weydii xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka.
Qaybi warbixinaha ku saabsan korona oo gaarsii dadka kale, laakiin iska ilaali wararka kutirikuteenka ah ee aan saxda ahayn. Waxaa dhici karta korona in uu yahay mid cabsi gelinaaya dad badan, sidaas awgeed sheekooyinka kicinaaya dareenka qofka, waxaa ay sii xumeyn karaan dareenka iyo caafimaadka qofka dhallinyrada ah iyo kan dadka waayeelka ahba.
Adeegyada telefoonka ee qaybta caafimaadka iskuulka iyo daryeelka arrimaha caafimaadka ee ardayda, ayaad ka heleysaa talosoojeedinta iyo hagista ku saabsan arrimaha la xiriira nololwanaagga iyo caafimaadka dhallinyarada iyo carruurta. Telefoonnada waxaa ka jawaabaya kalkaalisooyinka caafimaadka ee daryeelka caafimaadka ardayda iyo iskuulka ee Vantaa. Adeegga waxaad ku heleysaa luqadaha finishka, ingiriiska iyo iswidhishka.
Lambarka adeegga telefoonka ee daryeelka caafimaadka iskuulka ee Vantaa waa 09 8395 0025, maalmaha isniinta – jimcaha, saacadda 8–15. Lambarka adeegga telefoonka ee daryeelka caafimaadka ardeyda Vantaa waa 09 8395 0035 maalmaha isniinta – jimcaha, saacadda 8–15.
Haddii aad u nuglaatay feyruska korona waa inaad u hoggansantaa nidaamka karantiilka.
Marka lagu amro in aad guriga karantiil ku gasho, waa inaad guriga joogtaa, oo aadan ka bixin. Marnaba wax xiriir u dhowaansho ama kulan ah ha la yeelan dadka ka baxsan guriga, u hoggaansan tilmaanbixinta iyo hagista lagu siiyay. Karantiilku waqtigiisa ayuu ku dhammaan doonaa!